कसरी भयो धनुषामा बम बिस्फोट ? के भन्छन घाइते ? – Sawal Nepal
पत्रपत्रिका २८ मंसिर २०७६, शनिबार १०:४९
शंकास्पद बस्तु बम नै हो भन्ने एकिन गर्न प्रहरी निरीक्षक दाहालले आफैं झोला नाछामेर नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली बोलाएर निष्क्रिय गराउन सकेको भए त्यत्रो ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिन पनि सक्निथ्यो । एता प्रहरीले भने घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । कसले र किन बम राजेशको घरमा राख्यो भन्ने कुरा प्रहरीले अहिले पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
अजय अनुरागीले लोकान्तरमा लेखेका छन्, यो खबर हामीले लोकान्तर बाट साभार गरेका हौ
दमक अस्पताललाई सेन्सर सेनिटाइजर मेशिन सहयोग